QM, Midowga Afrika & Yurub oo dalbaday in la muddeeyo waqtiga
Wakiilo kala duwan oo ka kala socday Midowga Yurub & Afrika ayaa goobjoog ka ahaa ka qaybgalka shirka gaarka ah ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay.
Waxa ay dhageysteen xaaladda Soomaaliya, macluumaadka uu gudbiyay ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, safiirada Dalalka qaar ee Soomaaliya ku sugan & xogaha sida joogtada ah looga daabaco.
Qaramada Midoobay, Midowga Yurub & Afrika ayaa isku raacay in si degdeg ah dhinacyada Soomaalida looga baahan yahay waqtiyeenta Doorashooyinka oo muddo ahaan xiliga lagu heshiiyay & muddo xileedka Hay’adaha Dowladda laga soo gudbay.
Waxaa lagu soo hadal qaaday rabshadihii Jimcihii 19-kii Febaraayo 2021 ka dhacay Caasimadda oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen Askar & Dad rayid ah, dhinacyadaan ayaa isku raacay si looga fogaado isku dhac kale in loo baahan yahay muddeynta waqtiga Doorashooyinka.
Hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay sheegeen in waqti ahaan muddo xileedkiisu dhammaaday 8-dii Febaraayo 2021 balse waxa ay wadajir u sheegeen Qaramada Midoobay Midowga Yurub & Afrika in aan ilaa haatan xal laga gaarin waqtiga ay dhaceyso Doorashada.
James Swan Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya oo ah mas’uul la kulmay dhinacyada Siyaasadda ayaa gudbiyay fariinta waxyaabaha uu ka dhex helay hadallada shaqsiyaadka uu qaabilay.
Rita Laranjinha, Agaasimaha maamulka ee Midowga Yurub ayaa sheegtay in haddii lagu guuldareysto dedaalada socda ay muujineyso welwelka Gobolka sida amniga, Xasiloonida & nidaamka oo meesha ka baxa.
Francisco Caetano Madeira, Midowga Howlgelinta AMISOM ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay ka feejignaanta rabshado ka dacha Soomaaliya oo haddii xal loo helo wax weliba si degen u soconayaan.
Beesha Caalamka ayaa xalka ugu dhaw u aragta heshiiska Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir ku gaareen Muqdisho 17-kii September 2020 inkasta oo saddex qodob caqabad ku noqdeen, balse bartamihii Febaraayo 2021 Xubno guddi farsamo ah oo ku kulmay Baydhabo ayaa sheegay in ay heshiis ka gaareen, keliya ay sugayaan in la saxiixo.
Regardless of the revolution, Darfur continues to be interior